Tag: jive | Martech Zone
30 Enterprise Yemagariro Ekukurukurirana Mapuratifomu
Chipiri, Kurume 3, 2020 Chipiri, Zvita 15, 2020 Douglas Karr
Pamhepo eprojekti manejimendi manejimendi akachinjika mumapuratifomu ehukama hwehukama, kusanganisira zviitiko zvezviitiko, mabasa, kuronga, manejimendi manejimendi uye kubatanidzwa kune ekunze masisitimu. Iyi indasitiri iri kufambira mberi nekukurumidza uye kune vatambi vazhinji muindastiri. Isu takaedza kutsvaga vatambi vepamusoro mubhizimusi rezvekudyidzana chikuva pamusika pano! Azendoo - Ronga, ronga, shandira pamwe uye uteedzere basa rechikwata chako kubva panzvimbo imwechete. Bizzmine - Flexible workflow platform yekurerutsa bhizinesi rako maitiro. Bloomfire
Kapost: Zvemukati Kubatana, Kugadzira, Kugovanisa, uye Kuongorora
Chishanu, Mbudzi 8, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kune vashambadziri vezvinhu zvebhizimusi, Kapost inopa chikuva chinobatsira timu yako mukushandira pamwe nekugadzira zvirimo, mafashama ekushambadzira uye kugovera izvo zvirimo, uye ongororo yekudyiwa kwezviri mukati. Kune maindasitiri akarongedzwa, Kapost inobatsirawo mukupa nzira yekuongorora pazvinhu zvemukati uye mvumo. Heino pfupiso: Kapost inogadzirisa nhanho yega yega maitiro muchikuva chimwe chete: Strategic - Kapost inopa chimiro cheporesi kwaunotsanangudza nhanho yega yega
B2B: Mavhidhiyo ari Kufurira Kutenga Masarudzo
Chipiri, Gunyana 5, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhidhiyo yakaitwa zvishoma nekutengesa kwevatengi, asi iwo chaiwo mukana unogona kunge uine bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) kushambadzira Mune ongororo ichangoburwa yakaburitswa naEccolo Media, multimedia yakanyora runyorwa rwekudyidzana seanokurumidza kukurumidza masvikiro avo vanoita sarudzo uye vanokurudzira vari kushandisa kuita sarudzo dzekutenga. Sezvatakawana muongororo yega yega yapfuura, mhando dzinonyanya kudyiwa dzezvibatiso mabrochure ezvigadzirwa & mapepa ematafura. Muchokwadi, vakapindura vakangowedzera yavo